Oromo Views & Headline News: 6/28/09 - 7/5/09
Shanee dhabamsiifne jachuun Abjuu fi Abdii kutannatti yeroo jijjiiramu – Abjuu kutaa lammaffaa
Barruu obbo Roobaa burltum tan jatte jattee fi abjuun guutamte ilaalchisee mata duraa armaan olii kanaan waa jachuun kiyya ni yaadatama. Ammas, barruu akka deebisatti barreefamte tana ilaaleen hammam takka namni qilleensa irra fiigaa jiruu fi dachii dhuma nuti ykn illmaan namaa irra jiraatan kana irraa jiraataa fagoo tahe argee. Ammas hirriiba abjuun guuttamte tanarraa isa dammaqsuu fi dachuma tana irratti yaadaanille taatu isa deebisuuf qalama kiyya as fudhachuuf dirqame.
Jalqaba xalayaa isaa irratti maqaa himachuu diddaa ijoolee ilaalchisee waa jachuus kan barbaade fakkaata. Dubbiin akkuma abjuu taatetti ifa tahuu baatulle akka dafee dammaquuf mee anummaan xumuraaf. Obbaleessoo, maqaa himuu yoo taate deebisaan atiis durumaanu maqaa keetiin barreessutu sirra ture. Yoo maqaa Qalamaan barreessuu filatte fi akka feetetti nama yakku barbaadde ammo kaan maaliif maqaa isaa hin barreessiin jachuu hin dandeessu. Jaldeessi dhallaa ofii hin argu akkuma ja’amu san dubbii nurraa hin godhin. Erga tan ijjoollee kaafteefu ati himachuu baattuus barruu keetirraa guutumatti wanni jachuu barbaadde ifa. Kanaafuu, ati keessa hin jiru yoo jattees akkuma mamaaksa Oromoo tokkotti :”Ijoolleen waan dheengiyyan bulgaati” ja’ama sana taati jachuu dha. Kanaas waanuma ijoolle tuquu keetiifan erga saniin jalqabde ja’ee tuqe.
Gara hundee dubbitti yoo deebine obbaleesso fakkeefadhu. Yoo keessa jiraachuu baatte nama, Oromoo addaan diiguuf warra abjaawu irraa oduu funaanee tuma gadi dhiisu tahuu keeti jachuu dha. Yoo kun tahuu baate ammo, nama diinaa kan Oromoo keessa oduu diinaa facaasu tahuu keeti jachuu dha. Karaa biraaniis, akkama baratetti imimmaan harraageessaa booyuuf nama alaa waa of fakkeessuu yaaluu dha.An garuu akka dhibbaa dhibbatti miccirama taate barruu keetirraa hubadha. Namoonni biroos akka akkasumatti hubatan ni mana. Eegaa kana filmaata sumaaf dhiisa. Qabxii irratti garuu. Si hidhachiisa suuta ykn sirriti dubbisi. Daftee drama fuula (capter) kana irraa akka hin damyne. Yeroo tokko tokko wanni baaraysee nama kaasulleen waan jiruuf ja’e.
Xalayaa barreefamte ilaalchisee Obbo Odaa fi kanneen ati maqaa xureessuuf yaalte abjuu keetiif ykn warra si fakkaataniif deebisaa deebisuun kan irra jiru natti hin fakkaatu – barbaadan garuu mirga isaaniiti. Haatahu malee, namni nama yakke tokko yakka isaa mirkaneessu (prove) gochuun dirqama isaati. Kana faranjiin “Inocent till proven guilty” jattiin. Kana jachuun, kan yakkeetu prove gochuu qaba. An gama kiyyaan Obbo Genati ati xalayaan bira jirtu jattu sana dubbisee hammam takka akka doofaa taatetti koflaa turre – waan hin jirre jachuu dha.
Kan biraa akka lammiiwwan biro dhaaba kana keessaa itti qulqulleesan irratti obbo odaan marihatuun isaa dhugaa yeroo dheeraaf adunyaan hundi haasawaa ture jatte. Abjuu kee keessatti adunyaa hunda gartee? Gama kiyyaan namoota hamma mana movie itti ilaalanu tokko keessa jiran waliin abjuu kana kan ilaalte natty hin fakkaatu. . Kana malees, erga adunyaan hundi waan kana dubbate mee raga isaa as baasi. Moo si duraa wal dhawe. Kanneen akkasitti marihachaa turen si dabalatee ABO keessaa bahani jiru. Waan qabatamaa dhabnaan amma xalayaa tee duraani irratti xalayaa waliif barreessan jatte, amma ammo bara dheeraa hasawame jatta. Dhiiroo kiniina kee liqimsitee arra? Moo human ol kaasisuu si barbaachisa? Gadaan Gadaa jijjiiramaati fi dhaadannoon adda addaa, sanuu waanuma radio fi kana kanarraa dhageessan fuutani itti fiigaa turtan gaaza (shidaa) fixate jannaan kanatti deebitan – miskiin.
Kan biraa erga nama jatte jattee ganda keessaan deemtuu fi hedduu abjuun cinqitu taateefu – Waldhibdeen Obboo A/Caalaa fi obbo Dawud jidduu jiru bara deehraaf si cinqaa jira jachuu dha. KKKKK maali haasaan bacancaraan akkanaa? Mee waan kana karaa lamaan haa ilaallu: Tokkoffaa, yoo jarri kun wal lolani araarri jidduu bu’e arrabaa fi ilkeenu wal dhabaa ati rakkoon kee maali? Silaa jiraateefu jachumaaf. Inumaahu wal dhabii isaan jiddu jiru furachuu dandayuun waan eebbifamu qabu. Kan lammafaa jarri lachuu dhaaba heeraa fi seera qabu keessa jiru. Dhaaba keessatti kan madheen waan biro godhan tahe heeraatu iisaan gaafata. Kana wanni si dhibee fi si galchu hin jiru. Miseensonni ABO toftaa dulloomtuu fi diinni itti dhimma bahuu dadhabeen hin sobaman. Hamma ammaa beeku baachuu keetiif hedduun gadda. Asirratti beeki akkuma nama sammuu kee bane ilaalaa jirutti wanni ati abjaawaa jirtu natti mullachaa jira. Dhugumatti, nama yakkullee fakkeefachu hin beeyne. Karaa biraan ammoo qabxiin Jijiiramni kanatti maaliif yakkama kan jatte waliin qabsiisa. Asmaraa namni USA irraa deemee wal araarsee kan jatte fakkaata. Kana abbaa akkasitti araarse san yeroo dhiheesitetti ykn maqaa nuuf himte itti deebina. Hundaafuu, kun hamma tokko warra jijjiiramaan hafarfamee waan kufe tahuu isaa namuu ni beeka. Kana malees ofiifu otuu akkasitti nama yakkaa jirtanu wal gurrattani baatan. Kun gaa akka siis dabalatu numa beeyta.. Kan isaan US irraa dhaqee araarse kun kanneen dhaaba keessaa bahan maaliif hin araarsin? Kkkk.
Qabxiin as keessatti tuqamu qabdu takka ani nama jijjiiramaaf dhaabbatu akka hin tahiin, dubatuufiis akka hin barbaanne fi siyaasaa Oromoo keessatti ilaalcha bilisa mataa keeti akka qabdutti barreesite. Obbaleessoo, namni ilaalcha bilisa qabu tokko waan hin jirre walitti suphuuf hin yaalu. Ilaalcha bilisa namni qabu tokko qormaata irratti waan hundaawe barreessa. Ilaalcha bilisa namni qabu tokko nama yakkee waan qabatamaa yeroo dhabu kanneen yakkeen isinummaanof prove godhaa hin ja’u. Namni ilaalchaan bilisa tahe tokko yaada madaalawaa fi ilaalcha madaalawaa tahe tokko dhiheessa. Silaa siif tarrisa garuu yeroo hin qabuuf. Garuu adeemsu barruu kanaa keessatti bakkoota akka akkas hin taane garsiisu siif akeeku yaala. Hundaafu, nama multiple personality qabdu waan taateef kan siif galu natti hin fakkaatu.
Hayyee, deebisaa jatte erga jalqabdeen booda fuuluma duraa irratti murni shanee jatte akkumaan si qaabachiisa ja’etti akka nama sammuu bilisa taheen hin jaanne tahuu kee garsiisu keessaa tokko kana – mee kanaa ilaalcha bilisaan qaba kan jatte? .
Dura qabxii A jalatti waan barreesite haa ilaallu. Xinxalli kee ykn hubannaan kee kun guutumatti waanuma duraan barreesite irraa addaa miti. Haala bara 1991 sana tahee fi kan sanboodaas tahe ati amma yoo hirriiba irraa kaatee ykn bayyanatte siti mul’ate malee gariin akka dogoggora tahee dhaabichinu fudhatee jira. Kan Asmaraa ammoo haalaa fi akkaataa itti tahe qaba. ABOn biyya tahe ykn abbaan fedhee gargaarsaaf yoo harka baneef fudhachuu fi dhiisuun kan isaati. Warri amma ati faarsitu kuniis achuma turanii fi ammallee dura deemaan keessan achumaa dura deemaa jira. Kanneen jala deemaa jiran karaa itti deemu waan hin beeyne tahuu isaa rganii jalaa faca’aa jiru malee.
Kanneen qabsoo irratti wareegaman ammoo duraanuu beekani waan itti seenani dha. Qabsoo keessatti kufuu fi ka’uun hiree dha. Lola tokko seenani kan madaawu kan wareegamuu fi kan ammoo nagaan mooratti deebi’u tu jira. Eegaa kan nagaan mooratti deebi’een atiis maaliif rasaasni sirratti hin bu’in jachuun hin dandayamu. Lolli Beydawaa akkaataa itti tahe qaba. Hamman ani xalayaa tana osoon hin barreessin namoota yeroo sana naannoo sana turan (yoo barbaadde akkuma jattetti sammuu walaba tahe qabaatte atuu qorachuu ni dandeessa) hubadhetti, kan hogganni yeroo sanitti mooraa sana ajaju abbaa waraanaa dabalate aangoo irraa bu’aniif kanumaafi.
As irratti bakka heddutti kan utaaltu fakkaata. Mee dhugumatti saahibban kee yoo obbaleessas warra micciramaa keessaa qabaate (akka keessa hin jiru jattutti – kk) gaafadhu. Kanneen ZKB facaasani deeman keessa kan amma Nirobi taa’ee abbaa waraanaa warra micciramaa jattaninillee yoo tahe jachu maafi. Oduun ati ganna tokkoof haasawama jattu kun ganna shanee ariine ittiin jattani labsitan haasawaa jirtaa? Kan yoo tahees eenyuutu hafarsaa ture? Kan gaafa 1991 tahe gaafuma sanuu xumuramee seenaan galmeesite jirti. Kan balleesse fi kan hin balleessin fuuldura seenaan itti gaafachuuf teessi. Kanaafi waan dubbachaa jirruu fi kana wanni walitti laayxuuf hin jiru. Kana duraanuu lalabdani nama isinirra fudhatu dhabdanii jiru. Kanaaf ammas diinatti bobahuu dhiiftani (sanuu yoo dandeeti itti qabaattan) oloola ganda keessaa umtanii hafarsitu. Warra isin jalatti afanfaajawee akka nama waa beeku of gochuuf qicaan isin dabarsitanu waan diinaa osoo hin tahiin olooluma Shaneen asiin baate achiin baate akka tahe namuu ni beeka.
Kan WBO dhihaas haalaa fi akkaataa qaba. Yoo keessa jiraatte hadhaa sana dhamdhamtee jiraate nuuf himuu ni dandeessa. Haalli waraanaa fi akkaatan kufaa ka’iinsaa waan ati biyya alaa kanaa hafarsituu miti. Kan biyya Somaliyaa irraa bahuus akkaataa qaba. Kan nama dhibuu fi kan ati hin tuqin tokko garuu warruma amma isan qaama ol’aanoo jattan keessaa abbaa waraanaa tahee waraana hamma tokko daangaan gahuun yeroo dhukaasni banamu dhiise Somalitti deebi’e. Amma biyya alaa irraa warra isin hogganu keessaa tokko. KKKKKKKK. Hundaafuu, warri ati amma yakkitu kun hanga hafee dirretti galchuu fi baraaruu warra dandeesise. Beeytaa wanni kun silaa Draamaa Abjuu keessanii fuula tokkoffaa irratti waan himamu irra ture. Amma fuula lammafaa irratti fiddee waliin laayxe malee. Dhiifama, moo fuulli duraa kan maqaa xurreessii fi gaaffii hogganoonni keessan Nirobi irraa isin gaafatan xiyyeefannaa isaa (attention isaa) gara birootti maysuu ture.
Kanneen akka obbo Dadafaa faa, osoo waraanatti deemanu kan Somali bazuqaadhaan dhooytte ummatuma isaani waliin wareegame. Mee amma warra Qabsoo bilisummaa irratti wareegaman (gatii ol’aanaa kafalan) akka maletti seenaa isaanii tolchuu fi xureessuuf maa tattaafattu. Jarreen kun warra seenaan faarsuu qabu malee, warra erga lubbuu isaani qaali qabsoo tanaaf kennan boodallee warri akka keesani dhoqee keessa ganagalchuu miti kana beeki. Seenaa hin jirreehu barreefachuuf tattaafachaa jiru. Kanneen University ammo waanuma beeytuu hin jiru. ABOn ammas kumaan qabsootti hirmaachisaa jira. Isaan keessaa kanneen sadarkaa hoggantti kufaa kufisaniis jiru. Kuniis waanuma haasawamaa turee fi jatte jatte jachuun akka irra dabruu barbaaddu ifa. Garuu, jatte jattteen ati qabsaawoota Oromoo maqaa xurreessuuf Wayyaanee dabalate dhimma itti bahaa turtee fi jirtutti dhimma bahaa jirtu kun hammam takka akka murni kee kun diinumatti ciilleefate garsiisa. Wanni beekuun sirra jiru tokko garuu – booyaa oolta malee hin milkooftu. Hoganoota dhaaba kanaa keessaa kanneen kufaa fi kufisaa jiran akka jiran dhiheenyuma kanaahu maqaa akka Obboo Legasaa Waagii faa kan dhageesse natty fakkaata. Dhiifama niin irraanfadhe – isallee isin shaneetu ajjeesse jachaa turtanii mioti – kkkkkkkk. Warra kijiba, haafuura jaallumaa balleessuu fi ummata gandaa fi lagan addaan qoqooduun fedhii keessan guuttachuuf deemtan tahuu erga isinitti dammaqame turee jira.
Amma wanni isin maraachaa jiru fi dawaan isin fudhachaa jirtan humni (doze) isaa isinirraa xiqaachaa jiraachu isaa garsiisaa jirtu. Shaneen isin dhabamsiifne jattan daran sosoohaa jiraachuu, iccitiin isin dhaaba keessaa duraan guurtani diinatti kennitan dhabamuu isaa fi qabsaawoonni isin keessaan diiguuf yaaddan baraarani qabsoo isaani finiinsuun diina irratti fulleefachuu isaati. Jatte jattee fi summiin isin mooraa qabsoo keessatti facaaftan hiddaan buqqaafamu isaati.Karaa biroon ammo akkuma Oromoon “kan hanna bare dooluutu sosooha” jattutti haaluma ABO keessatti oofaa turtaniin ofiifuu wal diigaa jiraachuu keessan qabatamaan mul’achaa dhufuu isaati. Akka keetitti kun abjuu osoo hin tahiin akkuma qabatamaan agarutti kanneen isin sobaa turtan dhugaa argaa dhufurraan kan ka’e gaaffii isin gaafatan deebisuu dhaburraan xalayaan isaani internet irratti faca’uu fi isiniis baqatoota warra biyyaa itti bituun qabsiisuu fi hiraarsuu keessani. Kana malees akkuma amma moraa ABO keessa bakka duraan dhiiftan sana jira jattani bajaawaa jirtanitti ofii ammo murna Kamali fi Lichoo jattani dhukkee walitti kaasuu jalqabuu keessani. Kuniis waan chapter/fuula lammaffaa kee keessatti hin barreefamin tahee osoo jiru qabatamaan arginee dha.
Kanneen OPDO keessaa dhufan ilaalchisee, dhugumatti kanneen roorroon ummata isaani itti dhagayame keessaa bahani mooraa qabsotti dabalaman jiraachuun isaani mamii hin qabu. Akkasumatiis kanneen fedhiin adda addaa irraa tuqamnaan bahaniis akka jiran beekuun barbaachisaa dha. Inni guddaan hubatamuu qabu tokkoo fi klan ati haguuguu barbaadde garuu Wayyaanee fi OPDOn akkasumatti huluuyxee galtuu ergachuu akka dandeessuu fi akka ergitees beekuu dha. An kan jachaa jiru kanneen akkasitti dhaaba kanatti dabalamani, osoo oolee hin buliin ergaa Wayyaanee hujjii irra oolchu jalqabanii dha. Kana gaa gara feetetti sharafachuu ni dandeessa. Garuu, karaa adda addaan ilaalamu ni dandaya. Akka keetitti fuuluma ofii itti bajaawuu barbaaddu qofaan kan ilaalamu miti. Dhugaan garuu ni tura malee mul’achuu hin oolu.
Karaa biroon qabxiilee B jalatti “HD ABO kan ture Dawud Ibsaa” jatte – hayyee mee kanaas akka ati jachaa jirtutti nama sammuu bilisaan yaaduu fi hin baabsine akkasumas qaama micciramaa hin taanetti waan garsiisaa akka hin taane waan garsiisaa tahuu kanneen barruma kee keessaa akka qabatamatti akeekaa jirutti dabaladhu. Kana jachuun nama sobdu barbaaddadhu jachuumaaf ja’e. HD ABO kan file GS ti kan buusu dandayus qaamuma kana malee walgahii hawaasa Minneapolis irratii miti. Dhiifama – akka isin jattanitti kora sabaa kkkkkkkkk. Gaafas akka tele conference dhaan Milishaan tokko jachaa turetti waraana harka 100 nuutu harkaa qaba. Waraanni Bahaa, kibba bahaa, kibbaa .. wkf hundi kora godhate ari heedha. Kk –mee tu ree? Warra loluu fi lolchiisuu diddeelleen ja’amee jira. Ajaa’iba, yoo kamala daggala seena ree. An duraan yeroo ji’a jahatti isin bilisoomsina jattani dachii dhiittan, waanuma duruu gaara seene sehe. Obbaleessoo, Oromoo ajeesaa fi ajeesisaa turee amma gaara seene mee yoo waa godhe tarii ummanni dhiifama godhaaf ja’ame kan hawwamee fi nutti himamaa turees achumatti bishaan dhuguu irra taree, moraa qabsoo diiguu irratti bobahe. Yakka yakka irratti hojjate jachu dha.
Kanneen diinaan qabamani ilaalchisee, kanas karaa adda addaan ilaaluun akka dandaymu beekuu akkamitti dadhabde. Dhiifama, as irratiis akkuma ilaalcha kee qofaaf waa tolfachaa jiru niin dagadhe. Garuu akkan ani ilaalutti - kan eenyummaa wallaaltee gadi dhiiftee fi kan isaaniif hojjachuuf walii galee biyya ollatti gadi baasaan addaan baafachu yoo dadhabde dhugumatti ilaalchi kee akka jatetti kan ofirratti hirkatu osoo hin tahiin abjuu dhuma diigumsaa keessatti waan xaxamaa ture dha. Kan nama ajaa’ibu Qilxuu Aadaa hoggana keessan ol’aanaa fi warra micciramummaa fide keessaa tokko tahee osoo jiru amma qabsoo irraa ala tahe jachuu keeti. Dhugumatti wal facaasaa jirtu. Ati akka taphatti kanneen biroo waliin maki malee seenaan isaa kaaniin adda. Kunuu fakkeenya waan amma irratti morkaa jirtuu tokko tahuu dandaya. Kanneen ati maqaa dhooyte kaan osoo ammallee qabsoo irra jiranu, kaan ammo (Qilxuun) ammas isin dhiisee Wayyaanetti galuu isaati. Waan dabaa, mee dura of sirreessaa ykn of qulqulleessa.
Firreen OPDO ilaalchisee ati kitaaba oloolaa ja’iin malee hogganootummaan ol’aanaa keessan xalayaa barreesan irratti jarreen Embassy Ethiopia waliin hariiroo cimaa qaban akka caasaa murna Kamaaliin kophatti jaarame keessa jiran saaxilani jiru. Kan biroos hedduu siif lakkaawu dandaya. Ati garuu waan qabatamaan argaa jirru tokko osoo tahee jiru, asumatti toftaa abjuu fiduun oloola shanee jachuu barbaadde. Ammaaf kanneenuma ati maqaa tuyxe irratti waa ja’e malee barbaachisaa taanaan siif tarrisa. Akka keetitti kijjiba tarrisuu osoo hin tahiin gama kiyyaan namni OPDO keessaa fira qabaateef akkas taha ykn moraa qabsoo basaasa jachutti hin amanu. Kanneen akkasitti qabaatani qabsaawoota amanamoo tahan hedduutu jira. Kanaa fi kanneen gaaffii jala galchuun dandayamu addaan baasani ilaaluun sammuu bilisa ati jattu san gaafata. Garuu maal godhu jachuma dhageesse dhimma itti baate malee irraa fagoo jirta.
Kan biraa manni hidhaa TPLF oromoon guuttame akka jiru beekkamaa dha. Garuu isaan keessaa meeqaatu akka ABO hulluuqee seenuu fi isaaniif hojjatu taasifameen gaaffii ani kaase. Ati garuu seenaa warri mirga dhala namaaf falmanii fi maybaasiin adda addaa himaa jirtu himuu yaalta. KKKKKKKK – beekkumsi fi dandeettiin isin itti dhaadattan kanumaa?
Qabxii C jalatti wanneen tuyxe ammo, ammas irra deebi’a sirritti dubbisi. Amma abjuu fuula lammafaa kanarraa damaquu waan dhihaatteef jacha si yaadachiisu barbaade. Kanneen eenyummaa isaani hin qoratamin hedduutu jira. Kun tahuu kan dandayeef kanneen keessa jiran gargaarsifatani akka tahe baramee jira. Obbaleessoo akka taskaaratti ulaagaa malee nama heddumeefachuuf kan walitti guuraa ture eenyu? Kanneen walitti guuraman keessaa ammaahu biyyatti galee kan OPDO hojjachaa jiru meeqa? Achi dhaqee deeb’ia ammallee bakkoota tokko tokkotti bakka bu’aa keessna tahee kan hojjachaa jirulleen akka jiru beekkamaa dha. Nama sobdu barbaadadhu.
Karaa biroon hoggana qaroo jatte kan ati haasoftu ammoo yeroo hedduu dhagaye, warruma qaroo ofiin ja’u sana dabalatee jachuu dha. Duuba amma qarummaa isaani maaltu irraa fudhe? Qarummaan isaani gadillee bahani waanuma ABO keessatti itti hin milkaawiin osoo hojjatanu warruma isaaniin sobame jala deemelle addaan facaasuu dha. Murna Kamal fi Murna Lichoo ykn ammoo murna Sisaay Soneessaa jattani addaan wal baasuu fi biyya ambaa keessatti wal adamsuu dha.loltuu dhiiga ilmaan Oromoon hidhachiifamte moral cabsitani ajajoota sobuun ofitti galchitan waan isin taatan argani diinatti galuu malee maaltu tahe.
Qabxii D jalatti waa’ee xalayaa Nirobi tuyxee jirta – maaltu deebisaa kennuuf yeroo hammana sirraa fixe. Hundaafuu ammas humaamiti abshir. Garuu mee yoo damaxee jiraatteef waa si qaabsisa. Dura garuu, yoo barruu kiyya keessaa lakkaawaa jiraateef wanni ati barreesite kun nama sammuu ofiin dubatu ykn bilisa tahe tokko si hin taasisu kuniis raga tokko. Ammas nama sobdu barbaadadhu gadi bahi. Waan itti amante tokkoof falumuun karaa fedheenu waan dansaa dha. Kar tokkoon micciramaaf hin dubadhu sammuu an bilisa jacha, osoo abjuu tokko hin fixatiin kan biraa keessa of galchuu si duraa taate. Hundaafuu, kan nama raaju, as irratti dhibdee miccirama jidduu jiru heeraa fi seeraan fixate jachuu keetii fi dhibdee obbo Dawidi fi obbo A/Caalaa jidduu jira jattee manaamtee uumtee akka murnatti dhiheessuu keeti. Oballeesso dooktara bira dhaqiiti dawaan naaf kennitan kun humni isaa xiqaate itti naaf dabalaa ja’iin.
Kana irra taree gaduma bahee duadhu of hin dhooysini. Waanuma ati jachaa jirtu irraa akka ati of dhiheesitu akka hin taane qabxii qabxiin waanuma ati barreesitu irraa si garsiisaa jira. Dubbii joolleen erga jalqabdeefuu, ammas waa itti siif dabala.Joolleen waa balleessaa anaamiti jattee waakkatu joollee gadhee dha. Kanaafuu, mee heeraa fi seeruma sanuu yoo qabaattan dubbii tana furaa. Kanneen ariine jattanii heeraa fi seera hin qabnee jattaniifiis hin cinqaminaa. Niis hin booyinaa !!!!!!!!. Hamma ammatti garuu kanneen tanaan dura waa isin gaafatanuu hisiisuu fi hiraarsu akka turtanii dha. Kanaaf, mee heeraa fi seeruma sanuu yoo qabaattan dubbii tana furaa. Hamma ammatti garuu kanneen tanaan dura waa isin gaafatanuu hisiisuu fi hiraarsu akka turtanii dha.
Karaa biroon gaaffii isaani oloola jatte bira dabruu barbaadde. Kan tanaanduraas akkasuma jachaa turtan. Mee akkuma jattetti siif sobamne nama yaada bilisa qabuu fi hin baabsine janneetu yoo si fudhanne waa si gaafadhe - mee malirratti dhaabbattee oloola jachuu dandeesse? Ajaa’iba, nama akka keetitti ofumaa ofitti dhukaasaa deemu takkaa hin agarre. Garuu, wanni maayii irratti jatte Draamaa fuula (chapter) kana fixxee kan damyxe tahe yoo kan jatte taate hedduu bareedaa dha. Ilmaan Oromoo wal nyaachuu fi walirratti bobahuun bu’aa qabu hin jiru. Xiiqqatu akka Oromooti diina irratti xiiyyeefachu irratti walii galuu dandayuuf arraarri barbaachisaa dha. Hunoo wanni irratti walii gallu tokko maayyii irratti argame. Hayyee yoo barbaachisaa tahe hamma fuula (chapter) dhufutti mee dawaan siif dhaame saniis human isaa dabaladhu, hirriibaa damaqi.
Ethiopia: The 16th Most Failed State in the World (Foreign Policy)
According to the Failed States Index 2009, Ethiopia is the 16th most failed state in the world; Ethiopia’s rank is worse than that of North Korea, where a tyrant rules with unflinching military dictatorship. The Index is a collaboration between Foreign Policy and The Fund for Peace; the Index is intended to highlight states that pose global security threats or bring tragedies for their own people. In March 2009 Ethiopia’s Prime Minister Meles Zenawi was ranked as the 16th World’s Worst Dictator by Parade magazine.
Foreign Policy has also revealed that, out of the most failed states in the world, Ethiopia is the 2nd big lobbying spender in Washington, DC; a jaw-dropping $4.4 millions was spent by the Ethiopian government for lobbying lawmakers.
The border dispute between Ethiopia and Eritrea continues to pose dangers ahead, according to Foreign Policy. The Ethiopian government’s clampdown on opposition as well as non-governmental organizations, and the skyrocketing food prices are examples of the characteristics of the failed state in Ethiopia. The border standoff has also led to the proxy war in Somalia between Ethiopia and Eritrea. Somalia is the #1 most failed state in the world, and this proxy war has exacerbated the already fragile situation in Somalia. Eritrea has ranked 36th in this year’s Failed States Index.
Full Story (Foreign Policy)
Posted by Oromia at 11:51 PM
Shanee dhabamsiifne jachuun Abjuu fi abdii kutannatti yeroo jijjiiramu
Xalayaa koree ol’aanaa jattuun Nirobi irraa barreefamtee dubbisee Diramaa warra Jijjiirama ja’uu jalqaba irraa kaasee hamma ammatti osoon yaadaa jiruu xalayaa Draamaa jattu tana arge. Xalayaa tanas waaniin beeku irratti hundaawee osoon xiinxalee hammam takka, xalayaan “ Draamaa keessa shanee “ jattu tuun akkuma aadeefametti dhugaa jirtuu fi Diraamaa mul’ataa tahe irraa yaada namaa faffcaasuuf akka barreeefamte hubadhee gadde. Gaddi kiyya kun namni ykn murni xalayaa tana barreesse hammam takka sammuu ilmaan Oromoo tuffachaa akka jiru ifatti waan argeef aniis gama kiyyaan waaniin beekuu fi kaniin argaa jiru dubbachuuf qalama kiyya gadi fudhadhe.
Eegaa, yeroo dhuma gabaaduu duratti abalu fannifne abalu ajjeefnee fi abalu ariine jachaa kanneen jijjiirama ofiin ja’an lalabaa turee nu hundi ni yaadanna. Abjuu kana birallee taree ji’oota jaha keessatti Oromoo bilisoomsuu illeen osoo hin hafiin himaamaa ture. Jalqaba iratti WBOn dhibbaa dhibbatti nu harka jira jachuun abjuun adda addaa tarrifamuu isaallee akka arratti argaa turre. Duuba osoo oolee hin buliin kanneen isaan dhabamsiifne, fannifnee fi ajjeefne jachaa turan akka isaan abjaawan akka hin tahiin ifa tahe. Ji’oonni jahan itti bilisoomnuus gannatti jijjiiramee, WBOn dhibbaa dhibbatti dhuunfaa keenya jala jira jachuun Mataa milishaa Wayyaanee duraani kan amma murna micciramee taheen midea, walgahii adda addaa irratti fi karaa tele conference dhaan gurri Oromootaa dude, laftiniis dhiitame waanuma wacaan dhaaba dhiiga ilaan Oromoon as gahe arruma fudhatan itti fakkeesse. Haatahu malee, osoo oolee hin buliin Draamaan isaan wacaan jalqaban dhumni isaa maal tahinna inni ja’u sammuu hedduu keenyaa keessa deemu hin oolle. Akkuma yaadametti garuu barreefama diraamaa kanaa ifatti arguu fi dubbisuu jalqabne..
Kun akkuma nama rifeensa tokkoon nama fannisaa bulee ganama yeroo ka’u humaa of biraa dhabe tahe. Gariin osuma dubbatamaa jiruu waan ifa tahee fi salpahatti mul’atu tahee dhufe. Akkuma amma barruu Roobaa Bultum kanarraa dubbifamaa jiruttis xumurri Draamaa kanaa ABO wacaan fudhachuu fi qabsoo dhiiga ilmaan Oromoo daraaree as gahe kana dhuunfachuuf DRAAMAAn isaani kun mi’eessa adda addaa tiin kan guutame ture. Kana keessaa qabsoon Oromoo hoggana dhabdee warrummaan ofiifuu hoggana turanii moraa qabsoo qancarsuuf karaa adda addaan hojjachaa turani fi dubbiin keessaan tahuufi baannaan gandummaan wal filanii achi bahaniin taphatamu jalqabeen hafarsamu jalqabe.
Dhugaa fakkeesuufiis hogganoota dhaaba ABO birootiin abaluu dadhaboo fi maqaa adda addaa itti kannuun nuutu isin bilisoomsa jachuun kanneen DRAMAA kana taphatan dhaadheefamuu fi dandeetii hin qabne kennuufiin jalqabame. Ammas Oromoon kanneen kana jachaa jirani fi taphatoota draamaa sobaa kana taphachaa jiran xiinxalee salphumatti kanneen WBO facaasani biyya ollatti galan, kanneen dandeetii fi eenyummaan osoo hinbeekkamin sadarkaa ol’aanatti muudaman, kanneen badii adda addaa hojjatanii fi kanneen dandeetii kan biroon yakkan qabaachu isaanii hoggana tahanii hujjiin hin agarsiisiin tahuu bira taree, karaa adda addaan moraa qabsoo bilisummaa Oromoo laamsheessuuf hojjachaa tuan tahuun isaa waan beekkamaa tureef barruu diraamaa isaani kana fuula fuulaan gargaalchani dubbisuun jalqabame.
Kan nama dhinqu qabsoo ofumaa xaxaa turan kanaaf kenneen qulqullumaan hamma dandayan gumaachaa jiran biroo itiin yakkan keessaa harka ol’aana hin qabne wahitti yeroo dibbee dhawan arguu dha. Kanneen bara baraan dhiibbaa adda addaa gochuu fi gandummaan dhaaba keessatti of ijaarani sochii dhaabichaa sakaalu qofa osoo hin tahiin karaa adda addaan sadarkaa diinatti iccitii dhaabaa baasuun akka karoorri lafa kaayame sakaalamu ykn hujjii irra hin oolle taasisaa turan alaa argaa turee fi amma xalayaa bacancaraa kana dubbiseef Draamaan kam akka tahe hubachuu jalqabe. Gaaffiin namni of gaafachaa ture garuu akkuma of tuulaa turanitti waan isaan qabatamaan garsiisan haa ilaallu kan ja’u ture. Gama kiyyaaniis kana hunda osuma argaa fi dhagayaa jiru akkasumas beeku mee carraa kenninee haa ilaallu , waan hunda hujjitu mul’isa isa ja’u filadhe – dogoggora cimaa.
Wayyaanee fi bitamtoonni OPDO jalaa toftaa adda addaan ergamani kanneen keessaan mooraa qabsoo akka rimatti nyaachaa turan gargaarsifachuun dhaabatti dabalaman jachoota akka “boodeesituu” ja’u kan Dargii, fi Wayyaanee irraa baratan qabsaawoota umrii siaani irra guddeessa falmaa qabsoo irratti dabarsanitti mogaasuun osoo jiruu ammas akkuma tahetti na ukkaamse – kuniis dogoggora ture.
Lakkuma deemaa dhufeen garuu, ABO fi WBO biyya keessaa dhiibame ummata isaaf qabsaawuu hanqisan jachuun yakka tarrifame tokkoos barruu draamaa isaani fuula tokko keessatti argamee. Erga akkas tahe mee isaan hujjiitti hiikuu haa jalqaban jachuun ammas bira tare. Kanneen kana jachaa jiran ammo kanneenuma yeroo adda addatti falmaa irratti kaan yeroo boonbii ofitti hiikee wareega qabsoo Oromoo of godhu harka kennatani, firreen isaani kan OPDO keessa jiraniin gargaaramuun deebi’ani kanneen keessa jiraniin akka haalli sun hin qoratamne ukkaamsuun, dhaaba keessatti waltahiinsa Wayyaanee waliin godhanii biyya alatti baafamuun hujjii diiggatti bobahuus ifa tahee osoo jiruu kanas arguu dadhabuun ykn waanuma carraa ja’u saniin ukkaamfamuun ammas dogoggorri guddaan hojjatame.
Amma garuu draamaan taa’anii tuma ilaalaa oolan xumura argachuu waan qabuuf kanneen ofiifuu hoggana tahani, amma ala bahuun guyya guyyaan haaluma ABO keessatti diiggaa uumaa itti turanitti ammas ofuma keessatti haaluma akkasii ofaa jiraachuun guyya guyyaan ala bahaa jiru kanaaf carraa kennuun sangaa eelmachuuf tattaafatuun tokko tahuu mul’achaa dhufe. Fakkeefachuunilleen waan jiraati, garuu saalfii wanni ja’amu jachoota isaan beekan keessa akka hin jirre ifatti arguun, qabsoon Oromoo tapha ijoollee warra fakkeessuuf ykn taasisuuf carraaqan kana irratti namuu murtii mataa ofii fudhachuu qaba. Eeyye, kun diraamaa diiggaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo waan taheef sabboontoonni hundi murtii fudhachu qabani fi tan yeroon gaafattuu dha.
As irratti qabxiilee xalayaa Roobaa Bultum barreesse irratti gabaabumatti waajachuu barbaada. Kuniis “Kanneen dhaaba keessatti hubatnoota siyaasaa addunyaa, naannoo fi ogummaa lolaa qaban dhaaba kana jijjiiruu danda'anii fi Oromoonis jala deemuu danda'u maqaa xureessuutti gadi jedhan.” Isa ja’u. Waan qabxii armaan olii kana keessatti tuqame sirrumatti yoo ilaallee Jacha, kanneenuma ogummaa fi dandeetii isaani ofiifuu nu hin garsiisiin irraa madduu isaa ti. Kana malees kannee OPDO irraa dhufani qabsoo kanatti dabalaman akka yaadametti dandeetii fi ogummaa kan qaban osoo hin tahiin kophee wayyaanee dhiquu fi dhiiga ilmaan Oromoo gadi naquun sadarkaa sana gahan malee doofoota, waanuma dubbatanuu fi hojjatan hin beeyne tahuu isaa waan hujjii fi haala qabatamaa taheen mul’achaa jiruu dha.
Kana biraas taree of duuba deebi’iin yeroo ilaalan dhaab ABO keessatti dabalamuu isaanii irraa jalaqbee waanuma lafa jaltti bukeefamaa turetti dhufuun gandummaa leellisuu qabsaawoota wal shakkisiisu iccitii dhaabaa qisaasuu malee wanni isaan agarsiisan hin jiru. Kana anuu ala taa’ee waan arguu dandayu keessaa tokko. Kan nama dhibu kanneen umrii isaani qabsoo kana irratti dabarsuun lolanii lolchiisan akkasumas injifannoolee hin tufatamne Oromoo gonfachiisan arra, kashlabbeen OPDOn alatti barnootaaf ergitee, hiree argachuun dhaaba kana hulluuqanii seenuun sadarkaa ol’aanaa gehani, jara isaan oftuulummaan yakkan kana daran hojjatan jachuun waanuma hin dandayamne tahuu isaati. Akkuma jachaa turetti kuniis abjuu, fi tuffii qabsoo bilisummaa Oromoo irraa kan madde tahuu isaati.
Dhugumatti dandeetiin akkasi yoo jiraate, kanneen waliin hojjachaa jirtan amansiiftani itti dabruun hojjachuu malee, maaltu gandaan dhaaba keessatti of ijaaruu fi wal guurratanii bahuu isin geessise? Dhugumatti ABO diinagdeen sakkaallee, shaneen dhumateef jachuu fi yeroo isinitti damaqamu namoota tokko tokko maqaa dhawuun abalu ganda abaluu irraa nu keessa jira, abalu ganda abaluu keessaa nuun waliin jira jachuun kanneen qubaan lakkooytan tarisuu malee maaltu hojjatame? Mee kanallee bira haatarru.
Hamma tokkoof dhaaboota Oromoo walitti finne erga jijjiiramni dhalate faa jachunieen turee miti ree? Waan ajaa’ibaa, dhaaboonni Oromoo akkamitti akka ULFO jalatti walitti qabaman namuu osoo beekaa jiru, kana faadhaan akka waan waa hojjattani of dhaadheessuun mee tapha joollee fi yaada nama dawaa maraatoof kennamu liqimsu malee eenyurraa eeggama dhiiroo. Akka warruma amma achi bahee jijjiirama ja’u kun ULFO dura dhaabachaa ture anilleen ni beeka. Duuba wanummaan isin jachaa jirtanii fi hojjattan hundi osoo oolee hin buliin akka ifa bahaa Oromoon isinitti kofluu fi taajjabu gochaa jiraachuu isaa namni isinitti himu akkamitti akka dhabame qofaatu deebisaa waan hin arganne tahaa jira.
Kan biraa halkanii guyyaa nuti gandummaa hin qabnu osoo jachaa jiratnu hujjii fi haala qabatamaa taheen garuu/ammo wanni hafarsaa jirtan sanuma tahuu isaati. Mee gabaabumatti barruudhuma ammaan tananaa haa ilaallu: Barruu dhuma taka keessatti “Oromoon akka waliin hin mari'anne gochuuf, Oromoota naannoo bahaa Oromoo Arsii qabsoo isin bara dheeraa irratti dhumaa turtan isin irraa dhunfate, kan dhihaatiin ammoo Oromoon Arsii isin balleessuuf deema jechuun osoo "church" hin hafin qe'ee keessa bobba'anii summii facaasuu fi gandummaan wal gurmeessuu eegalan.” Jatti. Dhiiroo kun akka waan Oromoo ganda tokkotti roorrifame fakkeessuun sobdanii fi sobaa jirtan tahuun isaa yeroo ifa bahetti ammallee wallee dhuma duriin wallisaa jirtu? Kana irratti waan hedduun jachuun ni dandayama. Garuu yeroo biroof haa bulfannu. Waan bulfataniitu yeroo isaa eeggate yoo bahu tola jachumaaf.
Kan hedduu raajji tahee fi akkuma ”kan galaanni fudhate, hoomacha qaqabata” Oromoon jatutti, akkasumas bakka amma dhaabbane irraa qofa kaafnee yoo ilaalle, akka dhaadattani namaa ol of gootanitti hujjii fi dandeetti akkasumas ammoo qaroomina qabsoo dhabuu keessanirraan maqa xureessii eegaluu keessani. Xalayaa Odaan barreesse kan abalu bira gahe gandi abaluu fi gandi abaluu haa wal lolan nuti akkana haa taanu jatti faa jachuu dha. Kuniis gandummaan isin xaxaa turtanii fi ABO keessatti shakkii fi diiggaa uumuuf dhimma itti baatan ammallee kufiiti bira geenyaan jaallan dhaaba isaanitti cichani hafuun gufuulee akka keessani mancaasan dadhabnaan kanaan dhufuu keessani.
Hamman beekutti namooni isin maqaa dhooftan kan akka obbo Odaa faan akka keessanitti reefu dhuftee qabsoo tanaa ykn kanneen dhaaba kana hin beeyne osoo hin tahin kanneen karaa dandayan hundaan of mirkaneessan tahuu bira taree kanneen hulluuyxuu ABO ilmaan Habashatti harka kanachisiisuu fi shiroota adda addaa saaxiluun dura dhhabatan tahuu isaani kan beekkame tahuu isaati.
Mee irra hedduu deebisaa kanaa namoota isin maqaa dhooftaniis asuma jiru isaaniif dhiifna yoo maddaallii isaani guuttaniif. Akka kiyyatti garuu, kanneen isin amma maqaa xureessuuf yaaltanii fi kanneen xurreessuu barbaadaniis waaniin beekuuf jalqabutu mee waanuma biroon kan hamma tokkollee isin tarkaanfachiisu dandayuun koottaa – maaloo. Beekkumsi fi dandeettiin itti ofdhaaddan kanumaa?
Kan biraa amma ammoo gosa irraa gadi deebitani madhee Horroo fi naanno dhuma sanitti bakka biroo tahe dubbachuu jalqabdan. Jarana kun isniifu hin hojjajne. Ofiifuu kanneen sobdan isinitti dammaqani dhukkee walitti kaasaa jirtu. Dheengaduma xalayaa Dura deemaa keessaniif (yoo karuma itti deemu ofiifu beeke) kan brreefame gaddaan dubbise. Ofiifuu wal saaxilaa jirtu. Mooraa qabsoo keessaa garuu dhukkubni bahee naqaa fi tasagabbiin jaalli fi hafurri jaallumaa waaree qabsoon gara fulduratti ilaalaa jirti. Kan nama dhibu hujjiin keessanii fi haasoofni keessan hundi, gandummaa tahuu isaati. Beekkumsi keessanii fi ilaalchi keessanu gandummaa irratti kan hundaawe. Dhiiroo yoomuma gandummaa irraa gara Oromummaatti guddattan.
Ilaalchi armaan olii kun kanneen kanaan dhimma bahani ummata addaan diiguu tattaafatan qofa kan ilaalu malee Oromoota (akka isaan himatanitti ganda isaani) hin ilaalu. Kun jala harriiquudhaan hubatamu akka qabu beeysisa. Kana wanniniin ja’eef ammas deemani akkana naan ja’an ykn haala warruma diigaa kana uume ilaalu irraa maysanii akkana nuun ja’an jachuun booycha isaan namaan soabanitti akka ida’atan waaniin beekuuf ykn draamaa hamma ammaa isaan taphachaa turan irraa ifa waan thaheef qofa.
Kan nama biraa dhugumatti shanees taanaan ariine akkas goone jachaa jirtu, maaluumaaf cinqamtu? Moo dhugumatti ni dhimmitan? Fakkeefadhaa. Kana hunda irra ammoo hujjiin waan jattan garsiisaa irra caalaa. Duraanu qabsaawoota ABO dhukkuba keessan itti dabarsuu dadhabdani keessaa baatani amma ala teessani ni hoojata jattanii yaaduun abjuu keessan isa guddaa taha.
Kan biraa qabsaawoota isin maqaa tuyxan keessattu obbo Odaan nama waan isin ganna tokko keessatti hin hojjanne yeroo gabaa keessatti hojjatu. Nama akka isin jattan osoo hin tahiin waan itti dhagayamuu fi waan itti amanu bakka fedhetti yeroo fedghetti dubbatu. Isan ykn jaallan kaan irratti xiiyyeefachuu itti hin milkooftaqn. Diina irratti hojjadhaa. Isaan kan isiniif yeroo qaban hin fakkaatu.
Ganna meeqa hoggana jattani of yaamaa turtanullee akkaataa hujjiin dhaaba tokko keessatti hojjatumu akkamitti akka hojjatamu beekuu dhabuu keessani.irraan kan ka’e doggora cimaa hojjachuu irra taree abalu asii fudhani abalu achi kaayan jachuunwaan isin hin dhibne laaqachuu tattaafachuu dha. Jarri kaan kaasani kaan achi godhan jattani ofii keessanuma keessatti alanfachaa jirtan. Ibiddi isin sababaa dirqama gara garaa irratti jaallan ramaduu irraa qabate jattani yaaddan waanuma akkumaan duraan ja’etti kiniina mata wareerri osoo hin fudhatin barreefame fakkaata. Hundaafuu, maaltu isin dhibe – isinuu ariine jattani? Dhugumatti dubbiin tun isin yaachiftee? Kkkkkkkkk maali salphinni akkanaa. ABOn yoomiyyuu daran ciminaan kan hojjatu taanaan, iccitiin isin dinatti osoo hin hafin facaasaa turtan kan eeggamu taanaan waanuma jattan ykn waan qabatamaa tahe dhabdane abjaawaa akka jirtan beekkamaa dha. Garuu, mee draamaa abjuuu keessan yoo dhiiftani waanuma fakkaatu abjaawaa.
Gandummaa irra dabree gosummaan isin dhaaba keessatti abaqaaltan dhumateef. Abalu ganda kanaa nuun waliin jira, balu ganda akkanaa keessaa nuun waliin jira jachuun teessani lakkaawadhaa. Oromoon of beeku shira keessaniif kan gowwoomu hin jiru. Kanneen isin akkana nu godhan akkana nu godhan jattani gaqndummaan sobdanilleen isinitti damaqee jira. Kana maleess diigumsi isin ilmaan Oromoo keessatti ammallee uumaa jirtan xalayaa Kenya irraa dhuftuunu saaxilamaa jira. Mee dura ofuma keessan qulqulleessa diina irratti xiiyyeefadhaa. Mana jibbitani keessaa baatan ala teessani waatu hafee jattani him ilaalina. Yoo gaabitan ammkoo hulaan isiniif banaa dha. Kan isin hin beeyne tokko kanneenuama karaa fedheenu Jaallan kun deebi’u qaban ja’ani falmaa jiran tahuu silaa beeytani waanuma silaa fulduraafillee karaa isiniif banu tokko irratti hin xiiyeefattan ture.
Maayyii irratti akka nama nagaa fakkatuus fakkaatu, hayyee naga barbaaduuf ammo waan hinjirre xeenyuun hin tahu. Mee dura dandeetti isin qabdan nu garsiisaa? Hamma ammaa akka garutti hogganoota ABO keessa walguurratani bahan keessaa kaan kolu galtummaa gaafate London jira, kaan dhihoo tana Wayyaneeti harka kennate. Kaan ofiifuu wal dhabee dhukkee walitti kaasaa jira. Dura dadhabina ABO keessatti uumaa turtani alaan bahattan irra aanaa. Kaan itti dhiisaa, abalu akkas tahee ibiddi qabatee fi wkf abjaawu dhiiftani, ibidda isin keessatti qabatee argaa fi dhagyaa jirru dhaamsaa.
Kufanii dhidhiitachuun soloquu malee bu’aa waan hin qabneef, qabsoo namoota maqaa dhawuu hujjii godhachhuu fi dubbii mana bunaa ykn ganda keessaa godhuun sadarkaa keessanitti gadi buuftani hin ilaalinaa. Kun gorsa akka Oromoo tokkotti isiniif kennu. Baatani, jara ariine jattani, humaa hin hojjanne jattani, hin lolan fi wkf. Jattani. Mee kana hunda irra caalaati isin nu bilisoomsaa.!!!!!!!! Akka amma ilaalutti garuu kana irraa fagoo jiraachuu qofa osoo hin tahin yaaduma jalqaba diinaan waa jachuu kan qabdan hin fakkaatu – hujjiin keessan halkanii guyyaa Shanee asiin baate asiin akkas taate dhuma. Halkani guyyaa, ganda kanaa fi kana jachuu qofa. Amma ammo gosaa fi magaalaatillee dabartan. Eegaa, isin tufatani dhiisan malee yoo barbaachisaa tahe karaa barbaachiseen quubsatti deebisaa isiniif kennuuf jaallan isin mqaaa tuyxanu ni dandayu. Garuu akka yeroo kashlabbootaan waliin atakaaroof hin qabne ammo beekkamaa dha. Akka nama gatii qabaatee irraa haasawn wahitti ol hiixachuu dhiisaa – teessan dhumatte. Dawaa/kiniina abjuu irraa ykn wareera irraa isin oolchu yeroon liqimsaa. Silaa tokko tokko yeroo dabarsee gaafa liqimsetti xalayaa akka ammaa kana barreessuun beekkamaa dha. Haatahu malee, nama karaa deemu hundi hoggana ol’aanaa tahe, kan dawaa yeroon liqimsu ykn dawaanu doktoraan hin kennamneef jiraachuun nimal jachumaaf ja’e. Gama kiyyaaniis fulduraaf yeroo akkanumatti dhukkubni isin cinqee waa jattan, yaada kiyya irratti kennadha. Kun ammo yoo dhukkuba dawaan wareeraa huh in dadnayin irratti waa xiqqoo isii dabale dhiifama naaf gootu – kkkkkkkkkkkk. Ammaaf barruun diraamaa isin abjjuun barreesitan hamma tokko ilaalee, mee yoo barbaachisa tahe kan hafe itti deebina.
Posted by Oromia at 11:03 PM
Shanee dhabamsiifne jachuun Abjuu fi Abdii kutanna...
Ethiopia: The 16th Most Failed State in the World ...